ခေတ်သစ်မိဘတွေဟာ ကလေးတွေကို ပညာပေးဖို့ ဆုပေးဒဏ်ပေးစနစ်ကို ဘာ့ကြောင့် မယုံကြတော့တာလဲ? - Lifestyle Myanmar
မိဘအုပ်ထိန်းမှုက ဘယ်တုန်းကမှ မလွယ်ကူခဲ့ပါဘူး။ ကလေးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအတွက် အရင်တုန်းကရော၊ ယခုရော ပဉ္စလက်ဖော်မြူလာဆိုတာ မရှိခဲ့ပါဘူး။ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ မိဘတွေဟာ မမျှော်မှန်းနိုင်တဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြရပါတယ်။ တကယ်တော့ ကလေးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းမှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ကလေးတစ်ယောက်က ထိန်းချုပ်မဲ့လာတဲ့အခါ လူကြီးတွေကို action ယူဖို့ ဖိအားပေးခံရပေမယ့် မကြာခဏဆိုသလို သူတို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာ သိပ်မသိကြပါဘူး။ သို့သော် ကျွမ်းကျင်သူတွေက ဆုပေး၊ ဒဏ်ပေးစနစ်ကို အသုံးပြုပြီး ပညာပေးခြင်းက ဆိုးရွားစေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ဆုပေး၊ ဒဏ်ပေးစနစ်တွေကို အခြေခံပြီး ပညာပေးခြင်းကို အတိတ်က ကိစ္စတစ်ခုအဖြစ် မှတ်ယူနိုင်ကြောင်းနှင့် ကောင်းမွန်သော လူကြီးတွေအဖြစ် ကြီးပြင်းလာစေဖို့ ကလေးတွေအတွက် အပြုသဘောဆောင်သော ပညာရေးရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေက ဘာတွေလဲဆိုတာကို မျှဝေပေးလိုပါတယ်။
၁။ ဆုပေးဒဏ်ပေးစနစ်က ဒိတ်အောက်နေပါပြီ
“ဒီရှုပ်ပွနေတာတွေ ကောက်မသိမ်းရင် အပြင်ထွက်မဆော့ရဘူး”…. ဒါက လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုခန့်အထိ အိမ်ထောင်စုအားလုံးမှာ အသုံးများတဲ့စည်းကမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပုံရပါတယ်။ အပေါ်ယံအားဖြင့် ဆုပေး၊ ဒဏ်ပေးက လုံးဝကွဲပြားတဲ့ သဘောထား၂ခုနဲ့ တူပုံရပါတယ်၊ သို့သော် သူတို့က တကယ်တော့ ဒင်္ဂါးပြားတစ်ခုရဲ့ မျက်နှာနှစ်ဖက် ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ဖက်လုံးက ကလေးရဲ့အပြုအမှုပေါ် focus ထားပြီး ချက်ချင်းသက်ရောက်မှု ရှိတတ်တဲ့ ပြင်ပတွန်းအားတစ်ခုသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းမှာ လူအများစုက ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဖွံ့ဖြိုးမှုအပေါ် ရေရှည်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုကို သတိမပြုမိဘဲ အဓိက ရလဒ် (နာခံမှု)ကိုပဲ မြင်ကြပါတယ်။
ယနေ့ခတ်မိဘတွေဟာ သူတို့ကလေးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်ဖို့ ဒီနည်းတွေ မသုံးကြတော့ပါဘူး။ “ရှုပ်ပွနေတာတွေ ကောက်မသိမ်းရင် အပြင်ထွက်မဆော့ရဘူး” ဆိုတာထက် “ဒီရှုပ်ပွနေတာတွေ ကောက်မသိမ်းရင် သားအရုပ်တွေ ဘယ်နေရာမှာ ထားလဲဆိုတာ သားသိမှာမဟုတ်ဘူး”လို့ ပြောကြပါလိမ့်မယ်။
၂။ ဘယ်မိဘမှ မလိုလားတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
ဆယ်ကျော်သက်နဲ့ ကလေးအထူးကုဒေါက်တာ Antela Nakab က ကလေးရဲ့ ပင်ကိုယ်စရိုက်ဟာ သူတို့ရဲ့မိဘတွေနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တွေ(ကျောင်း၊ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်း စသဖြင့်) မှတဆင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့ လေ့လာမှုတစ်ခုမှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် အပြစ်ပေးခြင်းက သွန်သင်ဆုံးမခြင်းရဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ် မသင့်တော်ပါဘူး။ အကြောင်းမှာ ပြဿနာအခြေအနေတွေကို မှန်ကန်တဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ ရင်ဆိုင်မယ့်အစား ဖိနှိပ်ချုပ်ခြယ်ခြင်း ဆိုတဲ့အယူအဆပဲ ကလေးတွေမှာ ပိုအားကောင်းလာပြီး အောက်ပါတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
မကောင်းတဲ့ အကျင့်တွေက မပြောင်းလဲသွားပါဘူး
ကလေးက ဘာမှားမှန်းမသိလို့ စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ တွေ့ကြုံရပါတယ်
ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားမှု နိမ့်တဲ့ပြဿနာတွေ ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်
အပျက်သဘောဆောင်တဲ့အရာတွေက အပြုသဘောဆောင်ခြင်းထက် အားဖြည့်ပေးပါတယ်
ကလေးတွေနဲ့ မိဘကြားဆက်ဆံရေးမှာ ဆုတ်ယုတ်မှုတစ်ခု ရှိလာပါတယ်
၃။ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ပညာရေးက အရာအားလုံးအတွက် အခြေခံဖြစ်ပါတယ်
အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ပညာရေးက အပြုသဘောဆောင်တဲ့ စိတ်ခံစားမှုကို အလေးပေးပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ၎င်းဟာ လက်တွေ့ကျတဲ့ စရိုက်လက္ခဏာတွေကိုပေါ်မှာ focus လုပ်တဲ့အပြင် သင်ယူမှုကို မြှင့်တင်ဖို့ ကိုယ်ပိုင်လှုံ့ဆော်မှုလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကို အောင်မြင်ခြင်းကနေ ရရှိလာတဲ့ “ချီးကျူးဂုဏ်ပြုခြင်း” ကိုသာ ကြည့်တာက လုပ်ရမယ့် အကောင်းဆုံးအရာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီအစား အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ပညာရေးကသာ ကလေးတွေကို သူတို့အပေါ်ထားတဲ့ မေတ္တာက ချွင်းချက်မရှိကြောင်း ပြသဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် လူတစ်ယောက်ရဲ့ခံစားချက်တွေကို ဖော်ပြခြင်း၊ ကလေးတွေကို သူတို့ဘာသာ ဖော်ပြခွင့်ပေးခြင်းက ချစ်ခင်မှုရဲ့သာဓကကောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
” သားရဲ့ ပြီးမြောက်အောင်မြင်မှုအတွက် မေမေ အရမ်းပျော်တယ်” ဒါမှမဟုတ် ” သားစီမံတာ အရမ်းကောင်းတယ်” ကဲ့သို့သော စကားစုတွေက ရုပ်ဝတ္တုဆုလာဘ်တွေထက် motivation ပိုရစေပါတယ်။ ဒေါက်တာ Angela Nakab ရဲ့အဆိုအရ ဒါက အမှန်တကယ် အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အားဖြည့်မှု ဖြစ်ပါတယ်။
၄။ ဆုပေးဒဏ်ပေး မကျင့်သုံးတဲ့ ပညာရေးရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ
အပြုသဘောဆောင်သော ပညာရေးရဲ့ မဏ္ဍိုင်ကြီး ၅ရပ်အရ သူတို့ရဲ့အပြုအမှုအတွက် ဆုပေးဒဏ်ပေးမခံရတဲ့ ကလေးတွေဟာ ဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးကောင်းတွေ ရှိပါတယ်။
သူတို့ကို ပိုမိုကျန်းမာစေသော Self-esteem ခံစားမှုသဘောကို ပေးတာကြောင့် ကလေးတွေမှာ ယုံကြည်မှု ပိုရှိလာပါတယ်
အကျင့်ကောင်းတွေ မြှင့်တင်ခြင်းနဲ့ပတ်သတ်လို့ စိတ်ကျေနပ်မှု နဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားမှု ပိုရပါတယ်
ဘဝအတွက် အခြေခံကျသော လူမှုဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်တွေ တိုးတတ်လာပါတယ်
မိဘတွေဟာ အုပ်ထိန်းမှုနှင့်ပတ်သတ်လို့ ခံစားမှု ပိုကောင်းလာနိုင်ပါတယ်။
၆။ မိဘနဲ့သားသမီးဆက်ဆံရေးကို ဘယ်လိုတိုးတတ်စေမလဲ?
မိဘတွေအနေနဲ့ သားသမီးတွေ မနာခံတဲ့အတွက် ရိုးရိုးအပြစ်ပေးတာထက် ဒီကိစ္စတွေကို သေချာတဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ ဘာ့ကြောင့်လုပ်ရတာလဲဆိုတဲ့ လေးနက်သော ရောင်ပြန်ဟပ်မှုကို ဦးတည်စေသော စည်းမျဉ်းတွေကို သတ်မှတ်တာက ပိုကောင်းပါတယ်။ ဆိုလိုတာက “မင်းအိမ်စာမလုပ်ရင် ဒီညဗီဒီယိုဂိမ်း မကစားရဘူး” ဟု ပြောမယ့်အစား ကလေးတွေအား “လေ့လာခြင်းက အကျိုးရှိသော အကြောင်းအရာအသစ်တွေကို သင်ယူဖို့ အခွင့်အလမ်းဖြစ်တယ်”ဆိုတာကို ပြသပေးတာက ပိုကောင်းပါတယ်။ ထို့ကြောင့် မိဘတွေအတွက် အကြံဉာဏ်ကတော့ ကလေးတွေရဲ့ အပြုအမှုအပေါ် အဆိုးလည်းမဟုတ် ၊ အကောင်းလည်းမဟုတ်တဲ့ affective မှီခိုမှုတွေ မထုတ်လုပ်ပါနဲ့။ သူတို့က တခြားအမှားအယွင်းမရှိဘဲ လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုကို တန်ဖိုးထားနေသရွေ့ လူကြီးတွေဟာ ဆုပေးဒဏ်ပေးအတွက် အခြားနည်းလမ်းကို သုံးနိုင်ပါတယ်။